रुपन्देहीमा विद्यालय हिँडेका दुई बालबालिका अपहरण गर्ने आफ्नै फुपाजु ! - Mechikali News
रुपन्देहीमा विद्यालय हिँडेका दुई बालबालिका अपहरण गर्ने आफ्नै फुपाजु !
७ फाल्गुन २०७८, शनिबार
बुटवल । विद्यालय हिँडेका दुई बालबालिकालाई अपहरण गर्ने एक जनालाई रुपन्देही प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा रूपन्देहीको सैनामैना नगरपालिका–५ का ३५ वर्षीय खेमबहादुर पौडेल रहेका छन् । खेमबहादुरलाई प्रहरीले शनिबार सार्वजनिक गरेको हो ।
खेमबहादुरले गत बिहीबार बिहान बुद्धनगरस्थित प्रभात बोर्डिङ स्कुल हिँडेका सैनामैना नगरपालिका–६, दूधराक्षकी पुष्पा दाहालका १२ वर्षीय छोरा प्रसिद्ध र ९ वर्षीया छोरी प्रसन्नलाई अपहरण गरेर झापाको विर्तामोड पु¥याएका थिए ।
घरबाट विद्यालयको लु १ ख ६५६८ नम्बरको बसमा चढेर गएका बालबालिकालाई पौडेलले बसका स्टाफसँग आफुलाई आफन्त बताउँदै फोटो खिच्न लैजाने भन्दै बिचबाटो बाटै बसबाट झारेर सुरुमा बुटवल ल्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । खेमबहादुर नाताले बालबालिकाका फुपाजु पर्छन् ।
घरबाट विद्यालय हिँडेका बालबालिका साँझ घरमा नफर्केपछि परिवारले विद्यालयमा बुझ्दा बसका चालक र कर्मचारीले बच्चाहरूलाई अभिभावकले बिहानै बसबाट झारी फोटो खिच्न लिएर गएको बताएका थिए । त्यसपछि मात्रै परिवारले छोराछोरी अपहरणमा परेको अनुमान गरेका थिए ।
शुक्रबार बिहानै इलाका प्रहरी कार्यालय रन्यौरामा घटनाबारे अभिभावकले जानकारी दिएपछि प्रहरीले विभिन्न युनिटहरू परिचालन गरी खोजतलास सुरु गरेको थियो । प्रहरीले खोजी गर्ने क्रममा खेमबहादुरले प्रयोग गर्दै आएको मोबाइल अफ थियो । उनको मोबाइल बिहीबार दिउँसो ३ बजेर ४० मिनेटमा बुटवलमै स्वीच अफ भएको प्रहरीले पत्ता लगायो । खेमबहादुरले बुटवलकै एक फेन्सी पसलमा बालबालिकालाई नयाँ कपडा किनेर उनिहरुले लगाएको ड्रेस र झोला त्यहीँ राख्न लगाएको खुलेको छ ।
अनुसन्धानकै क्रममा खेमबहादुरले बुटवल बसपार्कबाट बिर्तामोड जाने बसको टिकट काटेको भेटिएपछी प्रहरीको अनुसन्धान त्यतै माडियो । त्यसपछि प्रहरीलाई अनुसन्धानमा केही सहज भयो । प्रहरीले विशेष युनिट परिचालन गरी शुक्रबार दिउँसो विर्तामोडबाट दुई बालबालिकालाई सकुशल उद्धार गर्न सफल भएको हो । अपहरण गर्ने खेमलाई प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी मुद्दा चलाएको छ ।
रुपन्देही प्रहरी प्रमुख मनोज केसीले बालबालिकालाई परिवारको जिम्मा लगाएको बताए । खेमबहादुरले बालबालिकाका लाई पारिवारिक रिसिबीका कारण अपहरण गरेको प्रहरीको भनाइ छ । खेम बहादुर र उनकी श्रीमतीबिच केही समयदेखि खटपट भएको थियो । खेमबहादुरकी श्रीमती अपहरित बालबालिकाकी फुपू दिदी हुन् । पछिल्लो समय उनि माइतमा बस्दै आएकी थिइन् ।
विर्तामोड पुगेपछि खेमबहादुरले तिमीहरूका छोराछोरी फिर्ता ल्याउछु, मलाई मेरी बुढी र छोरी पठाइदेऊ भनेर परिवारमा भनेकाले यो आर्थिक लेनदेनको अपहरण नभई पारिवारिक रिसिबीका कारण बालबालिकालाई विर्तामोड पु¥याएको हुनसक्ने प्रहरी प्रमुख केसीले बताए ।
‘हामीले बेलहिया नाका, कृष्णनगर लगायतका नाकामा प्रहरी युनिट खटायौँ । तर, खेमबहादुर लामो समयदेखि भारतको दार्जिलिङ क्षेत्रमा बस्दै आएकाले बालबालिकालाई उतै लैजान सहज होस् भन्ने उद्देश्यले बिर्तामोड लगेको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।’ उनले भने ।